दशै अघि6बाणिज्य बैंक सहित 38 कम्पनीको लाभांश घोषणा , कुन कम्पनी को कति ? - News21Nepal
रास्ट्रिय सेयर बजार
October 22, 2020 news21nepalLeaveaComment on दशै अघि6बाणिज्य बैंक सहित 38 कम्पनीको लाभांश घोषणा , कुन कम्पनी को कति ?
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुले धमाधम शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन्। गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट ६ बाणिज्य बैंकसहित लघुवित्त म्युचुअल फण्ड,क्यापिटल र अन्य कम्पनीहरु समेत गरी ३८ वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरीसकेका छन्।
यस वर्ष दशैअघि निकै कम कम्पनीले मात्रै लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन्। नेप्सेमा सूचीकृत २६ वाणिज्य बैंकमध्ये माछापुछ्रे बैंकले दशैअघि नै लाभांश वितरण गर्ने गरी साधारणसभा बोलाए पनि कोरोनाको बढ्दो माहामारीका कारण दशैअघि साधारणसभा सम्पन्न गर्न सम्भव भएन । बैंकले कार्तिक ६ गतेलाई साधारण सभा बाेलाएकाे भए पनि हाललाई उक्त सभा स्थगित गरेकाे छ।
गत वर्षहरुकाे तुलनामा यस वर्ष दशैं ढिला भए पनि कोरोनाको असरका कारण सूचीकृत कम्पनीहरको लाभांश घोषणामा ढिलाई भएको हो। भोलीदेखि सार्वजानिक विदा भएको सम्पुर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका अन्य कम्पनीहरु समेत बन्द हुनेछन्। यस कारण दशैअघि अब अन्य कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्ने सम्भावना छैन।
यस वर्ष दशैं अघि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले साधारणासभा सम्पन्न गर्न सकेनन्।
कुन-कुनले गरे लाभांश घोषणा?
विगतका वर्षहरको तुलनामा यस वर्ष दशैअघि निकै कम कम्पनीहरुले मात्र गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षहरुमा यतिबेलासम्म निकै धेरै कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरी साधारणसभा समेत सम्पन्न गरिसकेका भए पनि यस वर्ष कारोना भाइरसका कारण लाभांश घोषणा र साधारणसभामा ढिलाई भएको छ।
यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले बोनस शेयरलाई बढी प्राथामिकता दिएर लाभांश घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकको नीतिले नगद लाभांशमा कडाइ गरे पश्चात पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढी बोनस दिन बाध्य बनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरधनीहरुलाई कर तिर्न केहि नगद लाभांश वितरण गरे पनि उनीहरुको जोड बोनस शेयरमा नै रहेको देखिन्छ।
२७ वाणिज्य बैंकमा ६ वटाले मात्र गरे लाभांश घाेषणा
२७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमा दशैं अघि ६ वटाले मात्र लाभांश घाेषणा गरेका छन् भने २१ वटा बैंकहरूले लाभांश घाेषणा गर्न बाँकी नै छ। लाभांश घाेषणा गरेका बैंकहरूले पनि बढ्दाे माहामारीका कारण साधारणासभा गर्न सकेका छैनन्।
वाणिज्य बैंकहरुमा माच्छापुछ्रे बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सानिमा बेंक र सिटिजन्स् बैंकले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका छन्। माच्छापुछ्रे बैंकले ७.०३ प्रतिशत बोनस र ३.३७ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.४० प्रतिशत लाभाश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ भने बैंक अफ काठमाण्डूले १३ प्रतिशत बोनस र ३ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। एनआइसी एशिया बैंकले १९ प्रतिशत बोनस शेयर र प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत, कुमारी बेंकले १० प्रतिशत बोनस र ४ प्रतिशत नगद गरी कुल १४ प्रतिशत र सिटजन्स बैंकले ७.७ प्रतिशत बोनस र ३.३ प्रतिशत नगद गरी कुल ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालसम्म विकास बैंकहरूले भने लाभांश घाेषणा समेत गर्न सकेकाे छैनन्।
६ लघुवित्तले गरे लाभांश प्रस्ताव, दुइवटाकाे नदिने निर्णय
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत ७७ वटा लघुवित्त कम्पनीहमध्ये हालसम्म ६ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट लाभाश घोषणा गरिसकेका छन्।
समताले २६ प्रतिशत, फस्ट माइक्रोफानान्सले १३ प्रतिशत, आरएमडिसिले २० प्रतिशत, आशा लघुवित्तले १५ प्रतिशत र आरएसडिडि लघुवित्तले १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
केहि लघुवित्त कम्पनीहरुले भने गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश नदिने घोषण गरेका छन्। स्वदेशी लघुवित्त र समिट लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश नबाँड्ने घोषणा गरेका हुन्।
त्यस्तै उत्पनदनमुलक समुहक ३ कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल ल्युव आयलले १० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने घोषणा गरेको छ भने युनिलिभर नेपालले १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट्सले २४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो।
१६ म्युचुअल फण्डले घोषणा गरे प्रतिफल
हाल सञ्चालनमा रहेका १६ वटा म्युचुअल फण्डहरुले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट इकाइधनहरुलाई वितरण गर्ने प्रतिफल घोषणा गरेका छन्।
हालसम्म प्रतिफल घोषणा गर्ने म्युचुअल फण्डमध्ये एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १ र एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्डले सबैभन्दा धेरै १२ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम १ ले सबैभन्दा थोरै ४ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालसम्म एनआइविएल सहभागिता फण्ड, एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड र एनआइसी एशिया ब्यालेन्स फण्डले भने सम्बन्धित इकाइधनीको खातामा प्रतिफल समेत पठाइसकेका छन्।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंककमा सहायक कम्पनी तथा क्यापिटलहरुले समेत लाभांश घोषणा गरेका छन्। हालसम्म कुमारी क्यापिटलले ४ प्रतिशत, एनआइसी एशिया क्यापिटलले १८ प्रतिशत, एनआइविएल एस क्यापिटलले २२.२२ प्रतिशत, ग्लोबल अनाइएमई क्यापिटलले ६.५ प्रतिशत र सेञ्चुरी क्यापिटलले ४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
स्रोत : मेरोलगानि
Tagged कुन कम्पनी को कति ?दशै अघि6बाणिज्य बैंक सहित 38 कम्पनीको लाभांश घोषणा
सुनको मुल्य वृद्धि ले आज पनि पायो निरन्तरता , कति मा भयो कारोबार ?
एनएलजी इन्स्योरेन्स (NLG) ले प्रस्ताव गर्यो आकर्षक लाभांश , बूकक्लोज कहिले?
सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स को लाभांश घोषणा , बोनस र नगद कति ? पूरा हेर्नुस !
November 11, 2020 news21nepal
पैसा तिर्न नसक्दा कांग्रेस नेताले उपचार नपाएको दावी
October 21, 2020 news21nepal